မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗိသုကာ လုပ္ငန္းမ်ာ ဝန်ဆောင်မှုများ | ShweProperty.com မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗိသုကာ လုပ္ငန္းမ်ာ ဝန်ဆောင်မှုများ | ShweProperty.com
Website: Website: www.asmconstruct.com
Address: No.222/A, Lanthit Road, Nanth Thar Gone, Insein, Yangon.
Category: Construction Architects
Tel: 09 45000 8400, 09 4500 57000
Website: Website: www.NaingGroupCapital.com
Address: No. 72, Cornor of U Wisara Road & Chin Twin Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 682203, 73033229, 095415122
Address: 9/B(Rm 2/A), U Tun Linn Chan St., Ward (1) KMYT, Yangon, Myanmar.
Thazin (Architectural & Engineering Design)
Address: 186/188(Rm 3/B), Pansoedan St., Shine Condo,Middle Block, Ward (4) KTDA, Yangon, Myanmar.
Tel: 256711, 703897, 095134031
Address: 170/176(Rm 404), Bo Aung Kyaw St., MGW Centre, Ward (8) BTHG, Yangon, Myanmar.
Pioneer Structural Design Group
Tel: 651165 Ext 2322, 652831
Address: (Rm 322), Bldg D, 3rd Flr, Pyay Rd., Ocean Supermarket, Thiri Condo, Ward (4) MYGN, Yangon, Myanmar.
မိမိဧည့်ခန်းဆိုဖာတွေ သန့်ရှင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
ဆိုဖာထိုင်ခုံနဲ့ ကုလားထိုင်တွေဟာ အပေါ်ယံစွန်းထင်းမှု၊ ဖုန်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေဒဏ် မခံနိုင်ရုံသာမက ဖိုင်ဘာထဲကိုလည်း အညစ်အကြေးတွေ ဝင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဖုန်စတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရပေမယ့် ဆိုဖာပေါ်မှာ ရှိနေတာပါ။…